China Custom China သံမဏိ CNC စက်ယန္တရားများတိကျမှန်ကန်သောစက်အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | အခြေခံ
စိတ်ကြိုက်တရုတ်သံမဏိ CNC စက်တိကျစက်စက်အစိတ်အပိုင်းများ
တိကျသောစက်သည်မည်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဆိုအဆင့်ဆင့်ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုထိရောက်မှုအတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ယင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အဓိက CNC Turning and Milling အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ထက် ၁၅ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးယင်း၏ခါးပတ်အောက်တွင်မည်သူသိသနည်း။ BMT သည် ထိုအချိန်မှစ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ၀ င်ရိုး ၃ ခုနှင့် ၄ ရိုးရိုးစက်များ၊ သမားရိုးကျခုံများ၊ ခုံလှီးဖြတ်စက်များ၊ ကြိတ်ခွဲစက်များ၊ လေဆာရောင်ခြည်ထုထည်၊ လေဆာရောင်ခြည်သုံးစက်များ၊ မင်းကိုဆိုလိုတာလား BMT သည်သင်လိုအပ်သည့်တိကျသည့်ပစ္စည်းများကိုသင့်အားထောက်ပံ့ရန်အတွက်အရာအားလုံးရှိသည် - အစိတ်အပိုင်းများကိုကြိတ်ခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်းမှအလိုအလျောက်စက်ပစ္စည်းများ၊
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်?
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်တိကျသောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုမတူညီရုံထက်မကပိုအကျိုးရနိုင်သည်။ ထိပ်တန်း CNC စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးသွင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောပညာရှင်များအားသင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ROHS, REACH, ASTM, ISO နှင့်အခြားနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုခံယူသည်။ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသငျသညျအများကြီးချွေတာစဉ်တိကျစွာစက်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအခြို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူအကူအညီလိုပါသလားသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် machined အစိတ်အပိုင်းများမှာယူချင်ပါသလား? သင့်အဆင်ပြေမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Dalian ၌တည်ရှိသော်လည်း CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင်လည်းတင်ပို့သည်။ BMT ၏အကျုံး ၀ င်မှုသည်ပြည်တွင်းစျေးကွက်များထက် ကျော်လွန်၍ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ရုရှားတို့တွင်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူများကကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်များကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်သည်။
သင်သည် CNC နည်းပညာအသုံးပြုမှုအပေါ်မှီခိုနေသည့်ဤလုပ်ငန်းတစ်ခုခုသို့မဟုတ်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင်သင်ပါဝင်နေပါက BMT သည်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ ကူညီနိုင်သည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါစသည်တို့အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကဘာလဲဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
သင်အဆင်ပြေစေရန်လိုအပ်သော CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိရှာဖွေရေးဘား၏အကူအညီဖြင့်ကလစ်အနည်းငယ် နှိပ်၍ ရှာနိုင်သည်။ အီးမေးလ်များကိုအချိန်မရွေးပို့ပေးပါ။ BMT — သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်!
ရှေ့သို့ စိတ်ကြိုက်လုပ် CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများဝန်ဆောင်မှု
နောက်တစ်ခု: Professional က OEM CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ
စိတ်ကြိုက် CNC စက်ဝန်ဆောင်မှု, တိကျသောစက်ကိရိယာ, စက်အသေးစားအစိတ်အပိုင်းများစက်, တိကျသောစက်အစိတ်အပိုင်းများ, သံမဏိ CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ, လူမီနီယံစိတ်ကြိုက် CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ,